Gnome na Xfce dị ya LMDE 201109 | Site na Linux
Gnome na Xfce dị LMDE 201109
Akụkọ a na-eche ogologo oge maka ndị ọrụ LMDE. Ọ mara ọkwa na Linux Mint ukara blog, nke dịlarị ibudata. LMDE 201109 maka Gnome na Xfce na nsụgharị ha maka 32 y 64 bit.
Ekwesiri icheta na nsụgharị a nwere otu ọrụ dị ka isi distro Mint Linux (dabere na Ubuntu), ma iji ihe ndabere Nyocha Debian, nke na - eme ka o nwee oru oma na oru nke Rolling Hapụ. Akụkọ ahụ abụghị ọtụtụ:
Niile atụmatụ nke Mint 11 Mint Linux.
Ntinye nrụnye (iche iche keyboard, ntọala mpaghara, mmezi ahụhụ, UUID na fstab).
Themes Kwekọrọ n'Ozizi gburugburu GTK2 / GTK3.
Emelitere software na nchịkọta.
2 Na-abịa mgbanwe na mmelite.
Okwesiri ighota na nhapụ a nwere obere nsogbu. LMDE abịa na kernel maka i486 nke na-anaghị akwado SMP ya mere naanị achọpụta ihe bụ isi na a CPU. O doro anya na kernel maka i686 nke dị na nchekwa nke Debian, na-enwe nsogbu na ngwaọrụ USB ma ọ bụ ihe yiri ya. Usersfọdụ ọrụ kọrọ kọrọ na-atụghị anya Kernels ụjọ mgbe ị na-adọpụ draịva ndị dị na mpụga.
En Nyocha Debian naanị na-akpọ «BỤ"n'ihi na i686. Na Mkpụrụ PAE bụ ndị arụnyere na Ndị sava na ìgwè ndị nwere karịa 4Gb nke RAM. Y’oburu na inwere komputa nwere 4Gb ma obu karie, ikwesiri itinye ya Kernel PAE-i686.
Na-abịa mgbanwe na mmelite.
Versiondị a na-abịa na Mmelite 2 na-atụ aka na repository «Linux Mint Debian kacha ọhụrụ«. Site na Nwelite 3, nchekwa nke «Nche"na "Multimedia", ghọọ akụkụ nke Kacha ọhụrụ na Linux Mint Debian.
Mgbe Mmelite 3 enwere, the sources.list ga-agbanwe, ha niile ga-arụtụ aka na na Mint Linux. Ka ọ dịgodị, a na-atụ aro ka ị ghara itinye mmelite site na «Nche» y "Multimedia"dị ka ọ pụrụ ịbụ dakọtara na nchịkọta si Mmelite 2.
E mekwaala ọwa raara nye LMDE: # linuxmint-debian en irc.spotchat.org. Yabụ ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ nsogbu ọ bụla, ha nwere ike ịga ebe ahụ. Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na onye nrụnye ị na-eji LMDE enwere ike iji ya na nkesa ọ bụla ọzọ dabere na ya Debian, ya mere ụmụ okorobịa si Mint ha na-emeghe ka ha na ndị mmepe ndị ọzọ nwee nkwukọrịta.
Enwere ike ịchọta enyo nbudata maka nsụgharị abụọ ahụ na njikọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Gnome na Xfce dị LMDE 201109
Echere m na nsogbu ndị ahụ anaghị emetụta onye ọrụ nkịtị
Ndo, abụrụla m onye ọrụ lMDE ogologo oge, mana emetụla m ọtụtụ ebe m na-edebe akwụkwọ nke na amaghị m ma m nwere ndị izizi.
Nwere ike biputere isi mmalite ya.LMDE 201109?
Nzaghachi ka ọ bụrụ sancho
Ndị a bụ ugbu a nchekwa maka LMDE:
Ebe ọ bụ na ịhapụ ntụgharị anaghị agbanwe, ọ dịkarịa ala ha ekwesịghị, ọ kwesịrị?
Mba, echeghị m na ha gbanwere, opekata mpe na Arch
Ndewo, enwere m mmasị iji LMDE mana enwere m pc dị iche, ọ bụ ahtlhon II X3 @ X4 na 4Gb nke ebule (m na-eme atụmatụ na ọtụtụ ọrụ) na hel, anaghị m enweta onye nwere ike inye nye m ezigbo nnyocha nke LMDE. Ha na-ekwu maka ịwụnye Kernel PAE maka i-686 mana amaghị m etu ọkụ mmụọ ga-esi mee ya maọbụ ọ bụrụ na ọ dị mfe itinye sistemu 64bit. Nsogbu dị na 64bits bụ na, ọ bụrụ na Ubuntu ọ were m ogologo oge iji chọta azịza iji wụnye ihe ndị dị ka Adobe Air, Amaghị m otu m ga-esi mee ya na ụdị Debian.
Nsogbu ọzọ bụ na ụfọdụ ndị enyi gwara m na nchekwa nke LMDE na-eweta ugbu a pere mpe yana na ọ bụrụ na ịchọrọ inwe ihe niile na-abịa na Debian ị kwesịrị itinye ebe nchekwa Debian, ma ọ bụ ule ma ọ bụ Squeeze.
Nwere ike ịkọwa m ntakịrị na nke a? M ugbua dịtụ anya ntughari si na-achọ azịza na-achọta ụfọdụ ma na-ezughị ezu zara. Daalụ n'ọdịnihu
N'agbanyeghị na abụghị m nnukwu onye ofufe nke LMDE, echere m na m nwere ike ịza ụfọdụ ajụjụ, agbanyeghị mgbe enyi m Ernesto (elav) zara gị, n'ezie ị ga-enwe afọ ojuju karịa, n'ihi na ọ bụ onye na-eso LMDE.
LMDE nwere ebe nchekwa nke ya, ee, mana ọ bụ ihe na-erughị 500MB, naanị ya nwere sọftụwia na-anọghị na Debian repos (Adobe Air, nke VirtualBox, Adobe Reader, World of Goo, wdg), ya mere doro anya I kwesiri iji Debian Squeeze na Debian Wheezy (ule) repos.
Banyere 4GB nke RAM, ee n'ezie, ị ga-eji kernel PAE, agbanyeghị na ọ gaghị emetụta mmemme nke 64bits, ọ bụrụhaala na kernel nwekwara 64bits echeghị m na e kwesịrị inwe nsogbu. Otu elav mgbe ọ na-ejikọ ma zaghachi gị, ọ kwesịrị inye gị azịza ziri ezi karị.
Ọfọn, ntinye nke Kernel 686 PAE esighi ike ma ọlị. Open mepee ọnụ ma tinye:
Nke ahụ ezuola. Okwu banyere nkwụghachi adịghị mgbagwoju anya ma ọlị. LinuxMint nwere enyo nke ebe nchekwa Debian. Ihe dị iche bụ na ọ bụrụ na ị jiri Debian Testing repos, ị ga-emelite ngwugwu ọ bụla na-abanye na nchekwa ahụ ma ị nwere ike ịnwe nsogbu na nchịkọta LMDE.
Gịnị ka ha mere? Ha mepụtara otu nnwale nnwale ahụ nke na - arụ ọrụ n’enweghị nsogbu ma ha na - agbakwunye mmelite ahụ mgbe ha na - enweghị nsogbu ọ bụla. LMDE nwekwara obere repo, ọ bụ nke KZKG ^ Gaara kwuru, nke na-eweta ngwaọrụ Mint.
Ekele m na ị ghọtara, ọ bụrụ na ọ bụghị, m ga-akọwa ọzọ
Echeghị m na ihe Kernel dị mfe, ihe nkwụghachi abụghị nnukwu nsogbu na m ga-ahọrọ ịhapụ ya n'ụzọ ahụ. Enwere m naanị otu obi abụọ, ọ bara uru itinye kernel PAE na pc na 4gb nke ebule ma ọ bụ ka mma ma ọ bụrụ na m tinye 64bits? Ọ bụ ezie na nke ahụ na-anọchi anya nsogbu na Ikuku na flash?
Ọ bụrụ na ị nwere 64 ibe n'ibe tinye ha ma ọ bụrụ na ọ ka mma PAE
Ysmụ okorobịa ajụjụ banyere ihe ndị a
Mgbe Mmelite Pack 3 dị, Source.list ga-agbanwe, ha niile ga-ezo aka na Linux Mint. Ka ọ dị ugbu a, a na-atụ aro ka ị ghara itinye mmelite sitere na "Nche" na "Multimedia", n'ihi na ọ nwere ike ọ gaghị adakọ na ngwugwu Mmelite 2.
enwere m ike inwe nnukwu nsogbu ma ọ bụrụ na m melite dị ka ọ dị na mbụ ??
M na-ekwu okwu ndị ahụ ka ọ dị ugbu a?
Naanị m na-eme ka m melite nchịkọta dị iche iche na apt-get
Ee nke ahụ, bụ ihe mgbu
«… Ọ na-atụ aro ya ghara itinye mmelite si“ Nche ”na“ Multimedia ”, dị ka ọ nwere ike ịbụ dakọtara na Mmelite Pack 2 nchịkọta.»
Enweghị m ohere iji rụọ ọrụ Mmelite 2 (Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ dị otu), yabụ, m ga - eme naanị ihe ha gwara m gbasara etu m ga - esi rụọ ọrụ Mmelite 3, ihe m na - aghọtaghị bụ ma UP3 na - eweta Ihe ngwugwu sitere na ya UP2, ma ọ bụ ka m ga-arụ ọrụ na UP1 / 2?, ebe ọ bụ na amaghị m etu ọ ga-esi emetụta sistemụ ma ọ bụrụ na m melite site na ebe nchekwa ahụ, n'ihi na m na-ata ahụhụ site na nsụgharị dị egwu ... nyere m aka>
Ọ dị mma, Aga m ahụ ihe ga-eme.
Iji mee ihe a niile, saịtị ahụ na-akawanye mma kwa ụbọchị.
Kedụ ka m ga - esi tinye mpempe akwụkwọ HP LaserJet 1018 m na LMDE?.
Echere m na m gbalịrị usoro niile amaara na enweghị nsonaazụ ọma ọ bụla. O yiri ka ọ bụ njehie na ndị ọkwọ ụgbọala sitere na webụsaịtị gọọmentị HP. Nke a ọ mere onye ọzọ? Mmadu enwere ike gwa m ihe banyere ya? Daalụ
Kwesịrị ịchọ ọchụchọ LMDE. 🙁
Daalụ maka azịza gị gafere, mana dịka m gosiri na post m gara aga, agbaala m ụdị ọkwa niile amaara. Emezuola m ihe ha kwuru ebe a:
http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?=68&t=63468 amakwaara m na usoro ahụ emere emeela ezi, mana n'ikpeazụ ọ na-enye mperi.
The LinuxMintDebian OS n'onwe ya na - etinye usoro ọzọ iji tinye ngwa nbipute, mana ọ naghị arụ ọrụ. Idebe ndị ọkwọ ụgbọala site na websaịtị ndị ọrụ HP na Desktọpụ m ma tụfuo iwu ahụ "sh", ọ naghị arụkwa ọrụ. Ihe ndị a bụ ihe ndị na-emechu ihu na GNU / Linux. Ọfọn, a na m achọ ịhapụ, n'ihi na amaghị m ihe ọzọ ị ga-anwale. Usoro dị ka LinuxMintDebian nke na-arụ ọrụ dị egwu, maka enweghị ike itinye ihe dị mfe dị ka ọ bụ na ngwa nbipute enweghịzi mmasị n'ihi na onye nbipute dị mkpa maka ụfọdụ ọrụ.
Ma, ọ bụ ihe ndị a kapịrị ọnụ. Ndị na-ebi akwụkwọ m nwalela arụ ọrụ, enweghị m ọnwụ nke ịchọta HP dị ka nke ahụ. Ihe niile bu ihe igwu ala. Enwela nkụda mmụọ, na n’ikpe-azụ, mgbe ịchọta ihe ngwọta ị ga-amụta ihe ọzọ.
Iji nwee ike ịwụnye onye nbipute ahụ, gbanye peeji a na ihe niile metụtara ya.
Ọbụna enwere nkuzi na Spanish. Naanị ihe ị ga-eme bụ ịchọ na ime ihe ọ gwara gị. Jisie ike na ekele.
Site n'ụzọ, ị ga-ebu ụzọ wepụ iwepụ hplip na ihe niile metụtara hp. M wụnyere otu ihe maka otu enyi (hp1018) na m nwere hp LaserJet P1005, nke bụ "pụrụ iche" karịa. Emere m ya site na otu ibe mana ya na onye ọkwọ ụgbọ ala ọzọ.
Agbanyeghị, mgbe ọ dị ka ha dara ma kwụsị mbipụta, na-emegharị nwụnye. Ihe ndi a nile diri Ubuntu, nwa nwanne nna nke LMDE a.
Nsogbu m nwere na LMDE (enwere m ya na netbook) bụ na mgbe ị na-achụpụ draịvụ ike na ọ naghị ada ada: Enweta m ihuenyo ojii nwere ọtụtụ ozi njehie.
Ị nwere ike ị nyere m aka??.
Na ngwụcha, ị ga-abụ eziokwu: na Ubuntu ọ rụụrụ m ọrụ, mana na LMDE enweghị m ikike.
Ọ bụ eziokwu na, n'ihi ihe ndị a dị mfe na Windows ma dị mgbagwoju anya na ụfọdụ linux (maka ndị anyị na-abụghị ndị sayensị kọmputa), ndị mmadụ achọghị ịga n'ihu ebe a.
M na-enwekwa nkụda mmụọ ọtụtụ ugboro. Enwere m mmasị na Linux na-arụ ọrụ, mana ọ ga-amasị m ịme ihe niile (bipụta, nyocha, wepu eriri n'enweghị nsogbu, wdg) na-enweghị imeghe OS ọzọ.
Ekele m na ọ dị nwute na enweghị m ike inyere aka.
Olee otú ịmata, na Linux m nwere ike ike i scanomi, bipụta na karịsịa wepụ pendrive n'enweghị nsogbu 😕
Abụ m Pepe, ma jiri aha m.
Adị m agba nkịtị, mana m mechara nweta ya.
M tinyere njikọ nke ibe ahụ ebe ha kọwara ya, dị nnọọ mfe na nke mbụ.
Echere m na ị ga-etinye hplip site na synaptic ahụ, ọ bụghị site na ibe ahụ n'onwe ya, n'ihi na ọ nyere mperi mgbe ị na-ebudata ngwa mgbakwunye ahụ.
Ekele na ekele ọzọ.
Nke ahụ na - abụkarị nsogbu ahụ, ọ ga - aba uru karịa ịwụnye ngwa ahụ naanị site na ntinye ọrụ gọọmentị, karịa site na saịtị ndị ọzọ (ọbụlagodi na ọ bụ saịtị ọrụ nke ngwa ahụ).
Ndewonu. . Enwetara m LMDE gnome 64 bits ma n'oge a na-ebupụta na ndụ DVD m nwetara ihuenyo ojii na akwụkwọ ozi, akara na nọmba a makwaara dị ka (ihuenyo ọnwụ) Enweghị m ike ịwụnye LMDE biko ana m arịọ gị maka obere enyemaka ma ọ bụrụ na ị gbasiela ike. . .Ekele
Ndewo, a na m eme LMDE ogologo oge, ma na-eji mmelite linuxmint na-emelite ... kemgbe otu ọnwa ma ọ bụ karịa, ọ mere Gnome 3 ma afọ ojuju m enweghị ka m na Gnome2 ... Enwere m ike ịga xfce n’agwaghị ịtinye ihe niile .iso?
Ee ee, ị ga-etinye ngwugwu: Mint-meta-xfce ọ bụrụ na anaghị m ehie ụzọ.
Daalụ nke ukwuu Elav. Mgbe m gara wụnye ya ọ gwara m na e nwere ọtụtụ usoro ịdabere na agaghị etinye ya. M na-ele ha wụnye mbụ?
1- Kedu ihe nchekwa ị na-eji?
2- Nye m dependencies nke na-agaghị arụnyere na-ahụ ha.
Ebe a: Mint-meta-nkịtị bụ ebe niile ka ọ bụghị ihe ọ bụla
Ọpụpụ: Mint-meta-codecs ma enweghị m ike ịwụnye ya
Depèn: xfce4-xfapplet-plugin mana odighi etinye ya
Depèn: ọnwa-mbak-plugin ma ọ gaghị arụnyere
Depèn: ọnwa-thumbnailers ma ọ bụghị installable
Ndo, enwere m ya na Catalan mana a ghọtara ya 😉
Ee Aghọtara m .. Kedu ihe nchekwa ị na-eji?
Site na isi Linux Mint nkesa, ngwanrọ ngwanrọ bụ:
Ihe ngwugwu (isi)
Ihe ngwugwu di (elu ugwu)
Nchịkọta ebubata (mbubata)
deb http://packages.linuxmint.com/ Debian isi upstream ibubata
deb http://ftp.debian.org/debian nnwale nnwale na-enye ndị na-anaghị akwụ ụgwọ
deb http://security.debian.org/ nnwale na mmelite / mmelite bụ isi na - enye ndị na - akwụghị ụgwọ
deb http://www.debian-multimedia.org anwale isi na-abụghị n'efu
deb http://repository.spotify.com kwụsie ike na-abụghị n'efu
Ndewo: Ejila m Ubuntu na mbụ, agara m LinuxMint ma mechaa kesaa LMDE. Ka ọ dị ugbu a, azụrụ m netbook nke mini-110 3523la HP nke nwere Atom 550 (isi abụọ) ya na ụlọ ọrụ 64bit yana 2 GB ram DDR3, awụnyerela m nsogbu na LMDE 12 32bit na nke a, mana eziokwu bụ na site na mbido m. na-agbali iji wụnye LMDE12 64bit na ọ gaghị ekwe m omume site na pendrive. Agbalịrịla m ọtụtụ mmemme iji kwado nkesa ahụ: unetbootin, yumi, global installer boot, wdg, n'ọnọdụ niile, onye nrụnye na-ebu 64bit lmde ụdị nnwale zuru oke, mana mgbe m chọrọ ịwụnye nkesa a anaghị enye m ohere. Onwere onye maara ihe nsogbu nwere ike ịbụ, ọ bụ nsogbu net? nke intaller? Ekwesịrị m gbaa ụdị 64bit na DVD?… .. Ọ bụrụ na mmadụ maara ka esi wụnye ụdị debian nke linuxmint 64bit wee buru kernel PAE-i686 wee jiri ndị na-arụ ya rụọ ọrụ zuru oke, m ga-enwe ekele maka ya. Anọ m na-agụ na wụnye LMDE 32bit ọ gaghị ekwe omume ịtụgharị ya na 64bit, na tb m gbalịrị. Echere m na m amụghị gị.
LibreCAD: ihe na-adọrọ mmasị na AutoCAD